November 9, 2019 - Hargeele - Wararka Somali State
Barcelona oo Camp Nou guul kaga gaartay kooxda Celta Vigo, xilli Messi uu dhaliyay Saddexley… +SAWIRRO
Cayaaraha November 9, 2019
(Barcelona) 10 Nof 2019. Barcelona ayaa garoonkeeda Camp Nou waxay guul muhiim ah kaga gaartay kooxda Celta Vigo, kaddib markii ay kaga adkaatay 4-1, kulan ka tirsanaa horyaalka La Liga ee dalka Spain. Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala maray 2-1 ay ku hogaamineysay kooxda martida loo ahaa ee Barcelona. Daqiiqadii 23-aad kooxda Barcelona ayaa […]Sii akhriso
Real Madrid oo guul raaxo leh ka soo heshay kooxda Eibar oo ay booqatay…+SAWIRRO
(Spain) 09 Nof 2019. Real Madrid ayaa guul raaxo leh ka soo heshay kooxda Eibar oo ay booqatay, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 0-4, ciyaar ka tirsaneyd horyaalka La Liga ee dalka Spain. Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala maray 0-3 ay ku hogaamineysay kooxda martida aheyd ee Real Madrid. Daqiiqadii 17-aad Real Madrid […]Sii akhriso
Arsenal oo guuldarro xanuun badan kala soo kulantay kooxda Leicester City oo ay ku booqatay King Power Stadium…+ SAWIRRO
(Leicester) 09 Nof 2019. Arsenal ayaa guuldaro xanuun badan kala soo kulantay kooxda Leicester City oo ay ku booqatay King Power Stadium, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 2-0, ciyaar ka tirsaneyd kulamada 12-aa ee horyaalka Premier League. Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala maray 0-0 ay isku dhaafi waayeen labada kooxood Leicester City iyo […]Sii akhriso
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Barcelona Iyo Celta Vigo ee horyaalka La Liga oo la shaaciyey
(Barcelona) 09 Nof 2019. Waxaa la shaaciyey safafka rasmiga ah oo ay garoonka ku soo geli doonaan kooxaha Barcelona Iyo Celta Vigo kulanka goor dhow soo gali doona ee horyaalka La Liga ee dalka Spain Hadaba dhanka hoose kaga boggo Shaxda rasmiga ee kooxaha Barcelona Iyo Celta Vigo: Barcelona XI: Celta Vigo XI: Gool FM.Sii akhriso
Soomaaliya November 9, 2019
Shan sano kadib markii uu xilka qabtay horjoogaha kooxda Al-Shabaab ee argagaxisada ah, ayuu markii ugu horraysay soo duubay muuqaal dheer oo soconaya muddo dhan 52 daqiiqo. Marka loo eego si guud dulucda muuqaalkaan, wuxuu isugu jiraa sheegasho been ah, Calaacal iyo marin habaabin qaawan oo caada u ah horjoogaha kooxdaan. Muuqaalka oo la mal-dahay […]Sii akhriso
Tammy Abraham oo shaaca ka qaaday waxa uu Lampard u sheegay ciyaartoyda inta u dhaxeysay labada qeyb ee kulankii Crystal Palace
(London) 09 Nof 2019. Weeraryahanka kooxda Chelsea ee Tammy Abraham ayaa shaaca ka qaaday waxa uu tababarihiisa Frank Lampard u sheegay ciyaartoyda inta lagu gudi jiray qeybta nasashada ee kulankii Crystal Palace. Chelsea ayaa saddexda dhibcood kaga qaadatay kooxda Crystal Palace garoonkeeda Stamford Bridge, kaddib markii ay kaga adkaatay 2-0, ciyaar ka tirsan kulamada Sii akhriso
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Leicester City Iyo Arsenal ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey
(England) 09 Nof 2019. Waxaa la shaaciyey safafka rasmiga ah oo ay garoonka ku soo geli doonaan kooxaha Leicester City Iyo Arsenal kulanka goor dhow soo gali doona ee horyaalka Premier League. Hadaba dhanka hoose kaga boggo Shaxda rasmiga ee kooxaha Leicester City Iyo Arsenal: Leicester City XI: Arsenal XI: Gool FM.Sii akhriso
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Eibar Iyo Real Madrid ee horyaalka La Liga oo la shaaciyey
(Spain) 09 Nof 2019. Waxaa la shaaciyey safafka rasmiga ah oo ay garoonka ku soo geli doonaan kooxaha Eibar Iyo Real Madrid kulanka goor dhow soo gali doona ee horyaalka Premier League. Hadaba dhanka hoose kaga boggo Shaxda rasmiga ee kooxaha Eibar Iyo Real Madrid: Eibar XI: Real Madrid XI: Gool FM.Sii akhriso
Bardaale.(SONNA):- Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre oo maanta booqday degmada Berdaale ee gobalka Baay ayaa u kuur galay xaaladda dadka fatahaaduhu saameeyeen iyo sida loo wado howlaha loogu gurmanayo. Mudane Xasan Cali Khayre oo tegay goobaha ay ku suganyihiin qoysaska ka barakacay fatahaadaha ayaa dadkii uu la kulmay u muujiyay Sii akhriso
Golaha wasiirada oo ansixiyey go’aamo dhawr ah.
DDS November 9, 2019
Kulankii golaha wasiirada Itoobiya ee 75aad ee caadiga ah oo maanta la qabtey ayaa ansixiyey dhawr mashruuc oo kala duwan. Waxaa ka mid ah go’aamada u manata ansixiyey heshiis lala galey wadanka Jabuuti oo ah in la sameeyo qasabadaha qaadaya gaaska dabiica ha dhismahooda, sidoo kale waxa uu ansixiyey xeerka ak horta hadalada abuuraya is […]Sii akhriso